Daawo: Cadaalad darrada Jawaari ee mooshinka oo laga sammeeyay SAWIR xikmad xambaarsan! - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Cadaalad darrada Jawaari ee mooshinka oo laga sammeeyay SAWIR xikmad xambaarsan!
Daawo: Cadaalad darrada Jawaari ee mooshinka oo laga sammeeyay SAWIR xikmad xambaarsan!
Muqdisho (Caasimada Online) – Farshaxaniiste Amin Arts ayaa sawir cusub ku cabiray Cadaaladarida Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo u kala eexanaayo Madaxweyne Xassan Sheekh iyo garabkiisa iyo Xildhibaanada Mooshinka gudbiyay oo dhinac ah.
Sawir gacmeedka ayaa lagu muujiyay in Miisaanka uu yahay mid u janjeera dhanka Madaxweyne Xassan iyo Xubno ka tirsan Damjadiid sida ka muuqata Sawirka, halka Xildhibaanada Mooshinka wadana ay xaaladu ku xun tahay.
Sawirka ayaa waxaa la raaciyay Damjadiid oo wada dhaqaale adag oo lagu doonaayo in lagu kala burburiyo Xildhibaanada Mooshinka wada.